झापड उपहार - परिहास - नेपाल
अहिले देशमा सर्वत्र चर्चामा रहेको एउटै मात्र कुरा छ, मन्त्रीजीको झापड । झापड नेपाली समाजमा खास ठूलो विषय होइन । कुनै न कुनै बेला, कसै न कसैले, कसै न कसैलाई झापड ख्वाइरहेकै हुन्छ । तर ती सबै झापडमा पनि मन्त्रीजीको झापड जो छ, त्यसको अर्थ खास हुन्छ ।
जनताले अक्सर गुनासो गर्ने गर्छन्, सरकारले केही दिएन । त्यसो भन्नेहरुलाई उत्तर हो, झापड । आखिर सरकारले झापड त दिएको छ नि ! सरकारमा गएपछि केही ने केही दिनैपर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो । अब झापड दियो । जनताका लागि सरकारका तर्फबाट उपहार ।
कर्मचारीले पनि सरकारबाट केही पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् । झापड त पाएछन् नि ! के यो कम हो ? अहिले संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरु त्यति बलियो भइसकेका छैनन् । त्यसैले सरकार यतिबेला झापडै मात्र दिन सक्षम छ । भोलि सरकार बलियो भएका बेला लात्ती, किक, मुड्की, जुडो, कराते, घुस्सा आदि/इत्यादि पनि दिन्छ नै होला । अहिलेचाहिँ सचिव एवं कर्मचारी झापडमै सन्तुष्ट हुने हो कि ?
प्रकाशित: माघ ११, २०७५
म त आएँ
नयाँ भंगपछि फेरि नयाँ
तक्मामा मेरो नाम
बालुवा र बालुवाटार
हाम्रै प्रजातन्त्र राम्रो
माथि जेट, तल मिनीबस ?